Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada OYSU oo xalay shir ku qabatay magaalada Toronto.
Ururka Dhalinyarada OYSU oo xalay shir ku qabatay magaalada Toronto.
Posted by Dayr	/ November 11, 2018
Waxaa xalay lagu qabtay Magaalada Toronto caasimada Gobalka Ontario munaasabad si heer sara ah loo soo agaasimay ,soona qaban qaabiyay Ururka midowga dhalinyarada Soomaalida Ogadenia (OYSU) Qeybtiisa Ontario.
Munaasabadan oo ahay mid loogu magacdaray”Ha midoobaan walaalihii kala maqnaa” ayaa waxaa ka soo qeybgalay bulshada qeybaheeda kala duwan Sida dhamaan fanaaniin,Abwaanada, aqoonyahay iyo ururada bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda.
Xaflada ayaa laga jeediyay khudbado taabtay dareenka ka soo qeybgalayaasha shirka oon inta badan ku qotontay midnimada iyo guusha lagu gaadho , sidoo kale waxaa halkaas si talan taali ah loogu soo bandhigay sugaanta qeybaheeda kala duwan isuna jiibinayeen Faanaanta Somaaliyeed iyo ka soo qeybgalayaasha Shirka,Shirkan oo bilooday 8:00pm ayaa guul iyo far xad ku soo dhamaaday 2:00AM.